यति कुरा गर्यो भने मलाइ के भन्ने ? - पिटि अनलाईन न्यूज
यति कुरा गर्यो भने मलाइ के भन्ने ?
४ आश्विन, २०७८ ००:०४
#यति कुरा ग-याे भने मलाई केभन्ने ?
जे सुकै भनुन् , हामि जस्ता भुई मान्छेहुन्लाई त्याे कुराले खासै फरक पनि पार्दैन । पेचिलाे संघर्षको १२ बर्षकाे उमेर पार गरिसके पछि बास्तवमै म पक्ष बिपक्ष बिहिन भएर भुईं मान्छेकाे जिवन बिताएकाे छु । यहाँ लाखाैं भुईंमान्छे हरु अाअाफ्नाे कथा बाँचिरहेका छन् र अाफ्नाे सपनालाई जिउँदो राख्न हर काेशिष गरिरहेका छन् ।
फेरि पनि बर्तमान हाम्राे सामाजिक जिवनमा , हाम्रा दैनिक भाेगाईहरुमा प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव जबर्जस्त परिरहेकै छ । यहि सन्दर्भमा चाहेर वा नचाहेर हाम्रा मनहरु बिभाजित भएका छन्, हाम्रा अाकांक्षाहरु भड्किएका छन् । म जस्ता हामिहरु अाज सम्म पनि अगुल्टो ठाेसेर अागाे सल्काउने काेशिस गरिरहेका छाै हाम्रो हैसियत यति मात्रै हाे । तर बेला बेला मा हाम्रा अगुल्टो ठाेसाई बाट निस्किएकाे झिलुंगालाई तिहारकाे पटाकाकाे झिल्काे सम्झेर रमाउनेहरु पनि त छन् नि । हाम्रो मक्सद झिल्काहरुमा रमाउने कदापि हैन ।
हामि हजारौं भुई मान्छेहरूको सम्बन्ध रहेकाे त्याे राजनैतिक ईतिहाँसले किन पल पल झस्काउछ ? याे झस्काईले मलाई धेरै कुरा साेच्न बाध्य बनायाेे । त्याे समय हाे जुन समयमा पार्टी र क्रान्ति लाई साच्चिकै पार्टी र क्रान्ति जस्तो बनाअाैं भनेर तिब्र बहस चलिरहेको थियाे । धेरैका मनहरु बिभाजित हुन त्यहि समय बाट शुरु भयाे ,त्याे पनि संस्थागत ढंगले । पार्टीको पालुंटार बैठक / प्रशिक्षण कार्यक्रममा सतहमा अाएकाे दुई फरक दस्तावेजमा मैले क. माेहन बैध्य ( किरण) काे बिचारमा सहमत भएको थिएँ । किन कि पार्टी बिग्रन थाल्यो ,बिग्रन दिनुहुन्न भन्ने बिचार कम सुन्दर थिएन । त्यस पछि लागेको किरण पक्षकाे ट्यागले कहिलै छाेडेन । यसरी लागेको ट्यागले हामी जस्ता भुईं मान्छे हरुलाई सधैं पिडा दिईरह्याे। पार्टीमा अाग्रह / पूर्वाग्रह झन माैलाउन थाल्यो ,जाे क्रान्तिकारी पार्टीमा हुदै नहुनु पर्ने हाे ।
अाज सम्म त्यहि छट्पटीकाे बिचमा कसैको निरपेक्ष समर्थन या बिराेध नगरी टिकाटिप्पणी गर्ने गर्छु र ब्यंग्य ब्यक्त गर्नेगर्छु । अाज अाएर एउटा महान पार्टी , खुम्चदै जाँदा यस्काे दाेष एकहाेराे पार्टी अध्यक्ष क.प्रचण्ड माथि खन्याईरहेका छाैं । सायदै मैले सबै भन्दा धेरै अालाेचना गर्ने नेतामा प्रचण्ड बाहेक अर्को हाेईन पनि । साेच्दै जाँदा , बुझ्दै जाँदा हिजो किरण पक्षकाे त्याग लागेका अत्याधिक नेता कार्यकर्ताहरुनै किन यति धेरै निरुत्साहित भयाैं । किन यति चाँडै स्खलित भईयाे ? के यसकाे दाेष पनि प्रचण्डलाई नै थुपार्ने हाे ? मलाई लाग्छ पार्टी बिगार्नु र सपार्नु मा हामी सबै बराबर भागिदार हुनुपर्छ । अाज, चाहेर वा नचाहेर प्रचण्डलाई नै राजनीतिक केन्द्रमा राखेर नेतृत्व मानिरहेकाछाैं । याे कुरा उनि प्रति देखाएको हाम्रो अाक्राेश , अावेग , उनिबाट गरिएको अपेक्षाले नै पुष्टि गर्ने गरेकाे सत्य हाे ।
हाे, पार्टीको जिम्मेवार र अविभावककाे नाताले प्रचण्ड अलि बढी दाेषी हुनु र देखिनु स्वभाविक हाे । तर यसकाे मतलब अरु सबै निर्दाेष र असल भनेर म कदापि मान्ने पक्षमा छैन । हिजाे मार्क्सवादले सर्बहारा अधिनायकत्वकाे अाबस्यकता ठान्छ भनेर लडाउने र मराउने बाबुराम जि पनि हैन र ? रुकुम / राेल्पालाई अाधार बनाएर क्रान्ति गर्न रुसबाट फर्कने बादल जि हैनन् र? बाँच्ने हरुकाे मन बाट सिज अभियान अझै हटेको छैन हाेला । त्यो ऐठनले राेल्पा /रुकुम अझै निदाउन सक्दैन । यसको भागिदार त बादल पनि त हुन नि । सामन्तबादी एकाधिरकाे बिराेध गर्दै, बिद्राेह गर्दै सामन्त भनिएका हिजोका राजाहरुकाे स्तम्भ समेत भत्काउदा निर्देशन दिने र तालि पिट्नेहरुमा क.बिप्लव के अछुटाे छन् र ? अाज पृथ्वीनारायण शाहकाे फाेटाे उनकाे काेठामा सजिने छाँट त देखियो नि । यसरी जनता र तल्लो स्तरका कार्यकर्ता सम्म दिग्भ्रमित पार्ने खेल त सबैले गरिभ्याएकै छन् । त्यसैले हामीले निकै ठूलाे बिद्राेहबाट याे अबस्थामा प्रबेश गर्दै गर्दा अापसमा हिलाे छ्यापाछ्याप गरेर जनताकाे अाशा र भराेशालाई कमजोर बनाउन कसैले कुनै कसर बाँकि राखेका छैनन् ।
अाज राजनैनिक परिबर्तनकाे जगमा टेकेर अार्थिक र साँस्कृतिक परिबर्तनकाे लागि निकै ठूलाे त्यागका साथ अात्म समिक्षा गरी एक ढिक्का हुने बेला अाएकाे छ । ढिलाे भएकै हाे तर थाेरै समयलाई उपयोग गरेर जनउत्तरदायी बन्ने नेता नै खास नेता बन्ने अवसर अाएकाे छ । अाज एउटा प्रचण्ड मात्र बिग्रिएकाे हैन, प्रचण्डलाई बनाउन खाेज्ने पनि बिग्रिएका छन् ,भत्काउन खाेज्नेहरु पनि बिग्रिएका छन् । एउटा बैचारिक स्कुलिङबाट अर्को राजनैतिक परिस्थितिमा प्रवेश गर्दा धेरै असाेभाविक नभए पनि मुलत: साँस्कृतिक चेतनामा अाएकाे स्खलनलाई सबै नेतृत्वले मनन गरेर एउटा अादर्श देखाउने हाे र बिस्वास दिलाउन सक्ने हाे भने बिचारलाई भत्काएर,मनहरुलाई भड्काएर हैन एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु अाजकाे मुख्य अाबस्यकता हाे । नत्र हाम्रो ईतिहास मेटिन सामन्त हरुकाे स्तभ ढाले झैं कसैले ढाल्नै पर्दैन । एउटा कालाे ईतिहास बनेर अाफै नामेट हुने निश्चित छ । त्यति सुन्दर बिचार ,त्यति सुन्दर भावना, देश र जनताका लागि भनेर त्यति ठूलाे त्याग / समर्पण गर्ने हामीहरु किन अझै अरुको नजरमा अातंककारी भईरहेका छाैं ? यस्काे समिक्षा गर्ने जिम्मा तपाईंहरू अाफ्नाे हठ र सानासाना झुन्ड हरुमा रमाउन चाहने नेता कमरेडहरुलाई छाेडिदिन्छाैं हामी भुईं मान्छेहरुले ।